Iwuli elu kwụsịrị ụgbọ okporo ígwè mgbe njem otu awa si Rom, na ị ga-rutere Bracciano. Nke a ọmarịcha ochie obodo dị n'ikperé Bracciano Lake nwere ọtụtụ nlegharị anya na-enye. Ọmụmaatụ, i nwere ike ịgagharị na Orsini Odesalchi Castle, which was a residence of many nobles.
Ihe bụ ihe ọzọ, a nnukwu mansion bụkwa ebe Katie Holmes di Tom irughari na 2006. Ọzọkwa, ị nwere ike ịgagharị Braccianos katidral, nke e wuru n'oge ochie ụfọdụ.
Dị ka a obodo nke bukwanu akụkọ ihe mere eme uru, Naples bụ nleta onye ọ bụla chọrọ ịhụ Italy na ime njem ụbọchị site Rome. Echiche nke Ugwu Vesuvius gbawara, ebube ije, na-ekpo ọkụ, enyi na enyi obodo ụfọdụ n'ime ndị isi atụmatụ nke obodo. Otú ọ dị, Naples bụkwa ma ama dị ka ndị omumu nke Pizza Margherita. Ihe ọzọ bụ na, ị nwere ike ịga na ụlọ pizza ebe ha mere nke mbụ Pizza - Antica ahụ ụlọ pizza PortAlba.